समृद्ध नेपालको सपना प्रवासी नेपालीको चाहना ४ - Enepalese.com
समृद्ध नेपालको सपना प्रवासी नेपालीको चाहना ४
इनेप्लिज २०७३ जेठ १ गते १३:०४ मा प्रकाशित
वेदभक्त जोशी अमेरिकामा रहेका नेपालीहरुमा संभवत स्सवैभन्दा पुराना आप्रवासी हुनुहुन्छ । सन् १९६८ मा अमेरिका आउनु भएका जोशीले सन् १९७३ मा अमेरिका नेपाल सोसाईटी क्यालिफोर्निया शुरु गरेदेखि नै समाजसेवामा समर्पित हुनुभएको थियो । पछि कामवाट अवकाश पाएपछि विगत २४ वर्ष देखि सामाजिक काममा समय वितेको छ । स्वप्न भूमिको रुपमा चिनिने अमेरिकामा झण्डै आधा शताव्दि विताउनु भएका जोशी भावी पिढीका लागि मेहनत नै सफलताको कसी भएको सुझाव दिनुहुन्छ । मेहनत गर्दिन भन्ने र अनुशासनमा वस्न नरुचाउनेलाई अमेरिकामा सहज नहुने उहाँको ठम्याई रहेको छ । ८५ वर्षको उमेरमा पनि उहाँको उत्साह र सक्रियता देख्दा विदेशी भूमिमा नेपालीहरुको पहिचान दिन जोशी सफल हुनु भएको अनुभूति हुन्छ । गत साता सम्पन्न नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ नेजाको अधिवेशनमा भेट हुनुभएका जोशी सँग समृद्ध नेपालको सपना प्रवासी नेपालीको चाहना स्तम्भका लागि मधुकर अधिकारीले गर्नु भएको कुराकानीको सम्पादित अंशहरु :
अमेरिका स्वर्ग भूमि हो भनेर त्यही वेलामा पनि सुनेको थिए । त्यसैले यहाँ आउँदा मलाई पनि रोमाञ्चक वनाएको थियो,जसरी पहिलो पटक पाईला टेक्ने नेपालीलाई कौतुहलता हुन्छ । साँच्चै यहाँको पूर्वाधार, कानूनी शासन र न्यूनतम आवश्यकताको लागि यो स्वर्ण भूमि हो । तर तपाईसँग मेहनत र ईमान्दारिता हुनै पर्छ ।
मेरो स्मरणमा भन्नु हुन्छ भने त्यो वेलामा केही पनि मिलेन । न खानपीन न त वातावरण नै, तर मिहिनेत गर्दा विस्तारै सवै कुराहरु मिल्दै आए । त्यो समयमा नेपाली नभएपनि अमेरिकनहरुले सहयोग गरे । अहिले आएर हेर्दा एउटा जुग काटेको जस्तो अनुभूति भएको छ ।
तपाई अहिले नेपालवाट आउने नेपालीलाई के भन्नुहुन्छ ?
खासमा नेपालवाट आउँदा अमेरिकामा डलरको वोट छ, टिप्न जाने हो भन्ने भ्रम हटाउनुपर्छ । म कानून सम्मत तरिकाले मेहनत गर्छु र कमाई गर्छु भन्ने हो भने यो भूमिमा अथाह अवसर रहेका छन् । त्यसैले नयाँ आउनेहरुलाई मेरो सुझाव छ तपाईहरु समयको व्यवस्थापन,साथीभाईसँग परामर्श गर्दे अगाडि वढेको खण्डमा व्यवस्थित जीवन यापन गर्न सक्नुहुन्छ ।
यस्तो कुराको पछि लाग्नु हुन्न्, मातृभूमिको माया कहिल्यै मेटिन्न,आमाको माया मेटिन्छ र ? मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले पनि शिक्षामा लगानी गरेको छु, अर्थात छात्रवृत्तिको माध्यमवाट जेहेन्दार विद्यार्थीलाई पढाई अगाडि वढाउन मद्दत गरेको छु । मलाई शिक्षा नै शक्ति हो जस्तो लाग्छ ।
यत्रो वर्ष विदेश वस्नु भयो, मातृभूमिको सामु देखिएको चुनौती के हो जस्तो लाग्छ रु
हेर्नोस,हामीहरुले नेपालमा छात्रवृत्ति मार्फत विद्यार्थीहरुको शिक्षामा योगदान दिएका छौं । हामीहरुले क्यलाफिोर्नियामा रहेको अमेरिका नेपाल सोसाईटी मार्फत वेस्टी एण्ड मेरिल गुडल छात्रवृत्ति कोषवाट ३६ जनाले छात्रवृत्ति प्राप्त गरिसकेका थिए छन् । यसैगरी वेद एण्ड केन्या क्याना जोशी छात्रवृत्ति कोषवाट ५२ जनालाई दिईसकेका छौं । यसमा मेरा छोराछोरीले एक लाखडलर चन्दा दिएका हुन् । यसमा अहिले करिव एक लाख ६० हजार डलर रहेको छ । तर यसमा भएको रकम केवल व्याजमा मात्र चलाउन पाईने भएकाले अहिले यसवाट व्याजको आम्दानीले एक जनालाई पनि छात्रवृत्ति दिन सक्ने अवस्था छैंन् , त्यसैले हामीहरुले वेद तथा क्याना फाउण्डेशनले अलग्गै छात्रवृत्ति दिदै आएको छ । हाल यसरी छात्र वृत्ति पाउनेहरुमा १५ जनाले दश जोड दुईको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरिरहेका छन भने तीन जनाले स्नातक तहको अध्ययन गरेका छन् । यसलाई निरन्तरता दिईरहेको छु ।
अमेरिका नेपाल सोसाईटीमा राखेको अक्षयकोष र त्यसको व्याजले छात्रवृत्ति सञ्चालन गर्न अप्ठयारो परेकोले मैले कम्तिमा दश प्रतिशत रकम खर्च गर्न पाउन अनुरोध गरेको छु । त्यो भएको खण्डमा मलाई सहज हुने थियो ।